कञ्चनपुरमा मतदान सुरु : मतदातालाई बम र झरीले छेकेन ! - Naya Patrika
कञ्चनपुरमा मतदान सुरु : मतदातालाई बम र झरीले छेकेन !
कञ्चनपुर | मङि्सर २१, २०७४
७ नम्बर प्रदेश कञ्चनपुरमा मतदान सुरु भएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख केशवसिंह भण्डारीले तीनै निर्वाचन क्षेत्रका सबै मतदान केन्द्रमा मतदान शुरु भएको बताए । उनका अनुसार शान्तिपुर्ण तरिकाले मतदान भएको छ । कञ्चनपुरका कांग्रेस र वामका उम्मेदवारले आफैले आफैलाई भोट हालेका छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ वामका प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार बिना मगरले पुर्नवास नगरपालिका–३ गोरख आधारभूत विद्यालयको मतदान केन्द्रबाट मतदान गरिन् ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ वाम प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार नरबहादुर धामीले बेदकोट नगरपालिका–४ बालज्योति बैतडा र प्रतिनिधि सभाकै काँग्रेसका उम्मेदवार एनपी साउदले भीमदत्त नगरपालिका–२ सरस्वती मावि उल्टाखामबाट मतदान गरे ।
भने निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ अन्र्तरगत भीमदत्त नगरपालिका –४ शान्ति निकेतन मतदान केन्द्रबाट वामका उम्मेदवार डा. दिपक प्रकास भट्ट र काँग्रेसका उम्मेदवार रमेश लेखकले बेदकोट नगरपालिका–८ बैजनाथ मावि गैलनदीबाट मतदान गरे । यस्तै काँग्रेस बाम प्रदेशका उम्मेदवार, अन्य पार्टीका प्रतिनिधी र प्रदेशका उम्मेदवार सहित स्वतन्त्रले पनि आ–आफ्नो मतदान केन्द्रबाट आफैलाई भोट हालेका छन् ।
बिहानपख पानी आएपनि मतदाता भने निर्धारित समय भन्दा अघि नै मतदान स्थलमा पुगेका थिए । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–७ हल्दुखालको महाकाली जनसेवा मावि मतदान केन्द्रबाट सय बर्षका बृद्ध महिलाले शुरुमै मतदान हालेका छन् । महाकाली जनसेवा माविका मतदान अधिकृत गणेश दत्त जोशीले सुरुमै उनले मतदान गरेको बताए । सबै मतदान केन्द्रमा जेष्ठ नागरिकको मतहाल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कञ्चनपुरका ३ प्रतिनिधी सभा र ६ प्रदेश सभा सदस्यका लागि ६४ चुनावी मैदानमा उत्रेका थिए । अब आजकै दिन कञ्चनपुरका ९ नेताको भाग्य ब्यालेट भित्र हुने छ । १३२ निर्वाचन स्थलका ३२० मतदान केन्द्रमा २ हजार ५६० कर्मचारी खटिएका छन् । भने सबै निर्वाचन केन्द्रमा १ हजार २८० स्वमसेवक समेत खटिएका छन् । ‘कञ्चनपुरका सबै मतदान स्थलमा निर्वाचनको पूर्ण तयारी भएको छ, ‘निर्वाचन अधिकारी भण्डारीले भने, ‘ढुक्क भएर मतदान गर्नुहोस् ।’
निर्वाचनका लागि स्थानीय प्रशासनले कञ्चनपुरमा सुरक्षा व्यवस्था चुस्तदुरुस्त बनाएको छ । मतदान पूर्व नै स्थानीय प्रशासनले सबै सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्दै कञ्चनपुरको सुरक्षालाई बलियो बनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख प्रकाशबहादुर चन्दले निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै कञ्चनपुर प्रहरी र सबै सुरक्षा निकायको समन्वयमा जिल्लाको उच्च सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको बताए । ‘सबै मतदान स्थलको सुरक्षाकर्मीले घेराबन्दी गरेको छ, ‘उनले भने, ‘मतदान स्थलको सुरक्षा भरपुर बनाएका छौँ ।’ मतदान स्थल लगायत मतदाताको सुरक्षाका लागि समेत प्रहरीले मोवाईल टोली मार्फत सुरक्षा प्रदान गरिरहेको उनले बताए ।
यस्तै सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल र भारतीय सीमा सुरक्षा बलले संयुक्त गस्ती गरेका छन् । गाउँ गाउँमा प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाली सेनाले गस्ती समेत गरिरहेका छन् । संस्कास्पद बस्तु, व्यक्ति तथा समुहको खानतलासी बढाएको छ ।
निर्वाचन कार्यालय कञ्चनपुरको तथ्याङ्क अनुसार १ लाख ३६ हजार ४५१ महिला र १ लाख, २८ हजार ५२३ पुरुष गरि कुल कञ्चनपुरमा जम्मा २ लाख, ६४हजार ९७५ मतदाता छन् । सबैभन्दा बढि निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा बढि मतदाता छन् । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा ४६ हजार ५५६ महिला र ४३ हजार २३६ पुरुष गरि कुल ८९ हजार, ७९३ मतदाता छन् । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा ४४ हजार ७८९ महिला र ४२ हजार ३३६ पुरुष गरि कुल ८७ हजार १२५ मतदाता छन् ।
भने निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा ४५ हजार, १०६ महिला र ४२ हजार ९५१ पुरुष गरि जम्मा ८८ हजार ५७ मतदाता रहेका छन् । तीनै निर्वाचन क्षेत्रमा पुरुष भन्दा महिला मतदाता संख्या नै बढि छ । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा २ हजार १५५, २ मा ३ हजार ३२० र ३ मा २ हजार ४५३ बढि महिला मतदाता रहेका छन् । सबैभन्दा बढि मतदाता निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २को (क) प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा छन् । यस निर्वाचन क्षेत्रमा २३ हजार ४६० महिला र २१ हजार ५४५ पुरुष गरि ४५ हजार १०५ मतदाता रहेका छन् ।
यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को (क) मा २२ हजार, २९४ महिला र २० हजार ८७६ पुरुष गरि जम्मा ४३ हजार १७० र (ख) मा २२ हजार ८१२ पुरुष र २२ हजार ७५ पुरुष गरि ४४ हजार ८ सय ८७ मतदाता रहेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को (ख)मा २३ हजार, ९६ महिला र २१ हजार ५९१ पुरुष गरि ४४ हजार ६८८ मतदाता रहेका छन् । यसैगरि निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ को (क) निर्वाचन क्षेत्रबाट २१ हजार, ४६७ महिला र २० हजार ७८६ महिला गरि ४२ हजार २५३ र (ख) मा २३ हजार, ३२२ पुरुष र २१ हजार ५५० गरि कुल ४४ हजार ८७२ मतदाता रहेका छन् । ६ वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा हाराहारीमा मतदाता रहेका छन् ।
मतदान स्थल नजिकै बम
कञ्चनपुरको उत्तरी चुरे क्षेत्र बेदकोटमा बम फेला परेको छ । बिहीबार बिहान बेदकोट नगरपालिका नगरपालिका जडेपानीमा बम फेला गरेको हो । स्थानीयले बिहान संस्कास्पद बस्तुदेखे पछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । बैजनाथ माविको उत्तरतिर नजिकैको बस्तीमा बम फेला परेपछि स्थानीय त्रसित
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार उक्त संस्कास्पद बस्तु डिस्पोट पार्नका लागि सेनाको टोली पठाईएको छ । उक्त क्षेत्रमा बम राखेपछि स्थानीय प्रशासनले शान्ति सुरक्षाको उच्च व्यवस्था गरेकाले मतदाताले मतदान गरिरहेका छन् । उक्त बमको अहिलेसम्म कसैले पनि जिम्मेबारी लिएको छैन् । घटना बारेमा छानबिन भईरहेको कञ्चनपुर प्रहरीले जनाएको छ ।
निगमले दुई सय ट्यांकर खरिद गर्ने
नेकपाले तोक्यो प्रदेशका नेता : को कसको निकट ?
अन्सारी हत्या प्रकरण : हत्याराको खोजी गर्न परिवारको माग